अपि पावरको ३९.३६ प्रतिशत हकप्रद समायोजनपछिको मूल्य कति ? | शुभयुग
अपि पावरको ३९.३६ प्रतिशत हकप्रद समायोजनपछिको मूल्य कति ?
न्युज डेस्कप्रकाशित मिति: २०७८ चैत्र १४, सोमबार (१ महिना अघि)
काठमाण्डौ – नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा अपि पावर कम्पनी लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन भएको छ ।
कम्पनीकाे ३९.३६ प्रतिशत हकप्रद सेयरपछि नेप्सेले प्रतिकित्ता ३ सय ६३ रूपैयाँ २७ पैसा कायम हुनेगरी मूल्य समायोजन गरेको छ । नेप्सेले आज आइतबारको अन्तिम कारोबार मूल्य ४ सय ६६ रूपैयाँ ९० पैसाका आधारमा मूल्य समायोजन गरेको हो ।
कम्पनीले चैत्र २५ गतेबाट हकप्रद सेयर निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गर्ने भएको छ । कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पूँजीको १ः०.३९३६ को अनुपातमा एक सय रूपैयाँ अंकित दरमा एक अर्ब ८ करोड ६० लाख रूपैयाँ बराबरको १ करोड ८ लाख ६० हजार कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । कम्पनीको हकप्रदमा चैत्र २५ गतेदेखि २०७९ साल बैशाख १५ गते बैंकिङ समयसम्म आवेदन दिन सकिनेछ ।
लगानीकर्ताले बिक्री प्रबन्धक मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेड, अपी पावर कम्पनी लिमिटेडको केन्द्रिय कार्यलय, मुत्तिलनाथ विकास बैंकका इटहरी, पोखरा नागढुंगा, नारायणगढ, सुर्खेत, नेपालगंज,धनगढी अत्तरिया शाखा कार्यलयहरु, ग्लोबल आईएमई बैंकका बैतडी गोकुलेश्वर,दार्चुला, डडेल्धुरा, महेन्द्रनगर, धनगढी, अत्तरिया शाखा कार्यलयहरु र नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृती प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सि आस्वा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयहरुबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । मेरो सेयरबाट पनि हकप्रद भर्न सकिन्छ ।